Golaha Shacabka oo Ka Shaqeynaya Badbaadinta Caafimaafka Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya – Kalfadhi
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa u raadinaya xal dhibaatada caafimaad ee ka jirta dalka. Golaha Shacabka ayaa gacanta ku haya Hindise Sharciyeed Gole Caafimaad loogu sameynayo Soomaaliya. Shalay ayaa mar Aqrintiisii Labaad loo horkeenay Golaha waxay Xildhibaanadu sheegeen inuu Sharcigani muhiim u yahay wanaajinta faya qabka caafimaadka Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya. Xildhibaan Haashim Nuur Aadan, oo ka aragti dhiibanayey Hindisahan, ayaa u sheegay Golaha iney Hindisaha ku jiraan waxyaabo badan oo laga maarmo, ayna ka maqan yihiin waxyaabo kale, oo muhiim u ah.
“Diiwaan-geliyaha Caafimaafdka waa inuu diiwaan-geliyaa xarunta caafimaad ayaa ku qoran Hidisahan” ayuu yiri Xildhibaan Nuur, taas oo uu ku tilmaamay ineysan ahayn shaqo u taala. “Diiwaan-geliyuhu waa inuu eegaa inuu qofka furanaya farmashi haysto aqoonteeda (shahaadadeeda), waa inuu fiiraya tayada daawada uu iibinaayo, dhaqaatiirta ka shaqeeneysa xarunta caafimaad iyo qaababka loo daweynayo bukaanka” ayuu yiri Mudane Nuur. Waxa uu sheegay iney dad badan u dhinteen dawo la siiyey ama si qaldan loo siiyey, taas oo uu sheegay inuu sharcigani muhiim u yahay inuu soo afjaro.
Xeerkan, oo ay ugu yaraan hal saac Xildhibaanadu ka doodayeen, waxaa aad diirada loo saaray tayada, xirfadda, aqoonta iyo waajibaadka dadka ka shaqeynaya Golaha Mihnadleyda Caafimaadka. Waxay Xildhibaanadu ka mideysnaayeen in shaqaalaha Golahaas ay noqdaan xirfadlayaal leh aqoontii caafimaadka. Si loo hubiyo iney guteen waajibaadka saaran, waxay Xildhibaanada qaar soojeediyeen iney muhiim tahay in awoodaha, uu Hindise Sharciyeedkani siinayo Hogaanka Golaha, la dhimo, oo la sameeyo cid kale oo loola noqdo go’aanada ay ka gaaraan xarumaha, dawooyinka, shaqooyinka iyo shaqaalaha caafimaadka.
“Guddigaan haddii uu qaldamo ama dambi galo cidii la xisaabtami lahayd meesha kuma cadda. Xirfadlayaasha ayuun baa sidii la yeeli lahaa aad loo faahfaahiyey” ayuu yiri Xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Allankey.
“Ku awood siinta diiwaan geliyaha inuu meesha xiri karo, waxaa igala fiican in laga dhigo in xarunta caafimaad lagu xiri karo markii ay buuxin weyso shuruudo cad oo qoran oo leysla yaqaan” ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad. Mahad waxaa kale uu ka hadlay inuusan Hindisahani adkeeneyn muuhiimadda qabashada shaqooyinka caafimaadfka la xiriira iney yeeshaan Soomaalida, oo kaliya. “Meeshaan waxaa muuqata in shaqooyinkii hoose ee ay ahayd in ay Soomaalidu ka shaqeyso ruqsad loo siinayo in ay qabtaan dad ajanabi ah” ayuu yiri Mudane Mahad Salaad.
Isagoo xoojinaya inaan si aan sharci ahayn loo furan goob caafimaad, waxa uu Xildhibaan Mahad Salaad sheegay inuu Hindase Sharciyeedka Golaha Mihnadleyda Caafimaadka u qoran yahay qaab dhiiragelineysa in si sharciga qilaafsan loo furto xarun caafimaad. “Sharcigana waxa uu muujinayaa inuu fursad siinaayo in si aan sharci ahayn loo furan karo xafiis caafimaadka ka shaqeeya, maxaayeelay xafiiskaas waxa uu muteysanayaa uun ganaax, sida ku qoran halkan” ayuu yiri Mahad Salaad. “Waxaana ka dhalan karta in ay dadku xafiisyo furtaan, dadna ay ku dhintaan, oo ay dambiyo ka dhashaan” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Isagoo ka digaya sida uu Hindisahani u dhigay, waxa uu Xildhibaan Mahad Salaad sheegay inuu aaminsan yahay in aysan sax ahayn in loo shaqeeyaha Soomaaliga ah uu isagu kormeero qofka ajanabiga ah ee u shaqeynaya. Waxa uu ku taliyey in loo shaqeeyaha iyo shaqaalihiisa ajanabiga ahba uu Goluhu kormeero. Xildhibaanad Farxiyo Muumin ayaa, intii ay kahadaleysay waxa ay u aragtay iney yihiin qaladaad ku jiray Hindisaha, sheegtay iney muhiim tahay inuu Sharciga Golahani Mihnadleyda Caafimaadka u qornaado qaab u sahleysa inuu uga shaqeyn karo gobolada JFS oo dhan.
Doodda Golaha Shacabka ee Hindisahan waxaa, sidoo kale, hareeyey erey-bixinada loo doortay in lagu cabiro mugga shaqada ay mihnidlayaashu qaban doonaan, oo sida ay Xildhibaanadu sheegeen u badnaa Afka Carabiga. Hase ahaatee taas waxaa difaacay Xildhibaan Nuuriyo, oo ka tirsan Gudiga Arrimaha Bulshada ee Golaha Shacabka, oo hadda gacanta ku haya Hindisahan. “Carabigu wuu ka buuxaa luuqaddeena, marka, markii aan sameeneynay erey-bixinada, wixii aan uga maarmi weynay ayaan soo qaadanay” ayey tiri Xildhibaan Nuuriyo.
Sida ay ku doodeysay Xildhibaanad Farxiyo Muumin Cali, Hindisahani waxa uu wiiqayaa shaqadii ay qaban lahaayeen Wasaaradaha qaar, sida Wasaaradda Caafimaadka. Markaas, waxay Xildhibaanaddu ka eegtay dhinaca dhaqaalaha. Golahan ayaa markii uu sharci noqdo kadib waxaa, sida ku qoran Hindisihiisa, uu dhaqaale ka qaadayaa Muhnadleyda, Dawooyinka, Qalabka iyo Xarumaha Caafimaadka, “taas oo aan caddeyn sida loo maamulayo” bey tiri “Xildhibaan Farxiyo. Waxay ka digtay inuu qofi ka been abuuro xirfaddiisa. “In lasoo cadeeyo waxa uu muteysanaayo haddii uu qofka caafimaadka ka shaqeynaya been abuur ka sameeyo xirfaddiisa” ayey tiri Marwo Farxiyo.
Xildhibaan Nuuriyo oo ka hadleysa maareynta dawooyinka dhaqanka ayaa tiri “sida kaliya ee aan u aragnay in lagu xakameyn karo isku dabiibidda dawooyinka dhaqanka waa inaan hubino cilmiga iyo aqoonsiga qofka ka shaqeynaya”. “Dhaqaatiirtu waa iney ilaaliyaan ineysan ku xadgudbin meelaha u gaarka ah qofka ee jirkiisa ka midka ah” ayey raacisay hadalkeeda.
Xildhibaan Guuleed Cayduruus Cige ayaa dul istaagay halista dhibaatada caafimaad ee hadda ka jirta dalka. Waxa uu sheegay inuu cudurka kansarka dhibaato ba’an ku hayo Soomaalida. Waxa uu carrabka ku dhuftay inuu xanuunkaas kusoo batay Soomaaliya. “Sida dadkii lahaa warshadaha ee ay Kiimikooyinku ku bateen ayey dadkeenu cuduro halis ah qabaan, waxaana laga qaadaa cuntada iyo dawada” ayuu yiri Xildhibaan Guuleed. Waxa uu sheegay ineysan dadku cudurkaas dawo uga heli Karin gudaha, saas daraadeedna aysan u sahlaneen iney dibadda ka doontaan daweyn. “Safaaradda Hindiya ee Neyroobi waxay ku tuseysaa 100 baasaboor, oo dadkii lahaa ay dhinteen intii ay jawaab sugayeen” ayuu yiri Xildhibaan Guuleed. Dowladda ayuu ugu baaqay iney arrintan u istaagto.